Madaxweynaha Maakhir State of Somalia oo xalay shir ku qabtey Hoteel Midnimo, ee magaalada Dhahar isla xalayna u baqoolay degmada Badhan. | maakhir.com
Madaxweynaha Maakhir State of Somalia oo xalay shir ku qabtey Hoteel Midnimo, ee magaalada Dhahar isla xalayna u baqoolay degmada Badhan.
October 26, 2007 in Maakhir | Tags: Dhahar, Maakhir
Dhahar: Madaxweynaha maamul goboleedka Maakhir State of Somalia Col. Jibriil Cali Salaad ayaa waxaa si baaxadweyne loogu soo dhaweeyey magaalada Dhahar duhurnimadii shalay, wuxuuna shir jaraa’id ku qabtey Hotel Midnimo ee degmada Dhahar, shirkaas uu uga hadlay maamulka dhawaan laga dhisay gobolka Sanaag iyo galbeedka Bari ee Maakhir State.
Madaxweynuhu wuxuu hambalyo iyo boogaadin usoo jeediyey ciidanka la dagaalanka xaalufinta, kuwaasoo uu sheegay in ay ku dayasha mudanyihiin, una baahan in lala shaqeeyo.
Madaxweynaha ayaa ugu dambeyntii ka hadlay colaadii ka dhacdey magaalada Boosaaso todobaadkii lasoo dhaafay, tacsi diirana u direy eheladii iyo qaraabadii dhibtu soo gaartey. Arintaas ayuu Col. Jibriil ku tilmaamay mid ah xadgudub iyo aargoosi qabiil oo ay hindiseen dad maangaab ah. Madaxweynuhu wuxuu sheegay in nabadu ay tahay gogosha noolaha, laakiin maamulkiisu u dulqaadan doonin wax xad gudub ah. Madaxweyne Col. JIbriil Cali Salaad ayaa wuxuu ku noqday degmada Badhan isla xalay kadib markii uu shirkii uu ku qabtey Hotel Midnimo.
Dhanka kale guurtida Beelaha Dubeys/Warsangali ayaa wuxuu shirkooda bilaaban doonaa maalinta bari ah, kaasoo looga hadli doono colaadii ka dhacday magaalada Boosaaso gaar ahaan weerarkii lagu qaaday xaafada Raf iyo Raaxo.
« Raxan ka tirsan Maraakiibta dagaalka ee dalka Faraansiiska oo soo gelbin doona Maraakiibta Shixnadaha Samafalka ee ku soo jeeda Dekedaha Koonfurta Somalia
A Great Victory for the Oppressed Nation of Ogaden »